केपी ओली भर्सेस पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री, कस्ले मार्ला बाजी ? - Sidha News
केपी ओली भर्सेस पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री, कस्ले मार्ला बाजी ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला देशका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सत्तासंघर्षमा छन् । एकपछि अर्को चुनौतीमा बाजी मार्दै बढेका ओलीले यसपटक पाँचजनाको घेराबन्दी तोड्न सक्लान् या नसक्लान् ? चासोको विषय बनेको छ ।
यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ । ओली त्यही प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने ओली सरकारको सिफारिशलाई नै सदर गरेकी हुन् ।
यसकारण पनि ओली विघटित प्रतिनिधि सभाबाट चयन भएका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले विघटित प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग एकपछि अर्को गर्दै र पछि संयुक्त बनेर आएपछि संघर्ष गरे । जसमा उनी अहिलेसम्म जित्दै आएका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग एक्लै संघर्ष गरे । एमालेभित्र झलनाथ खनाल र नेपालको द्वन्द्वले ओलीलाई फाइदा पुग्यो । दुई नेता वरिष्ठ नेतामा वरियतामा को अगाडि भन्नेमा लामो समय विवाद गरिरहे ।
एमाले रहँदै या माओवादीसँग एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्यले उनी मजबुत थिए । नेपाल उनीसामु निकै कमजोर देखिए । ओली र प्रचण्डको सहकार्यले विपक्षी दलहरु पनि कमजोर देखिए ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २ वर्ष बित्नै लाग्दा भने ओलीको प्रचण्डसँग चीसोपन बढ्दै गयो । बेला बेलामा सहमति त बन्यो तर टकरावले जटिल अवस्था ल्यायो । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल गरी तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग ओलीले संघर्ष गरे ।
तीनजना मिल्दा पनि ओलीलाई पार्टी र सरकारबाट हटाउन सकेनन् । ओली झन् बलियो देखिए । नेकपाभित्र ओलीको विरुद्ध बहुमत बनाउन सकेनन् । बनेजस्तो के भएको थियो नेकपा विधिवत् रुपमा फुट्यो ।
ओलीले आफ्नै दलका तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सडकमा समेत विरोध कार्यक्रम गर्न वाध्य पारिदिए । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीको विरोधमा सडकमा निस्किएको दृश्य देखियो । ओलीविरुद्ध त्यतिञ्जेलसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कडा रुपमा प्रस्तुत भएनन् ।
प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पनि देउवा तयार भएनन् । ओलीविरुद्ध जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई खुलेरै लागिरहेका थिए ।
उनी पनि ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा सशक्त रुपमा उभिए । त्यतिबेला चार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भए । तैपनि, ओलीसँग उनीहरुको केही लागेन । घटनाक्रम यसरी विकास भयो कि ओलीविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित देशका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एकजुट भएका छन् ।
उनीहरु एकजुट भई ओलीको विकल्पमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दुईपटक प्रयास गरे । पहिलो प्रयास सफल भएन । दोस्रो प्रयासमा बहुमत संख्या जुटाएपनि ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १५३ सांसदको समर्थन दाबी देखाए ।
देउवासँग प्रत्येक सांसद गरी १४९ को हस्ताक्षर थियो । ओलीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्षका रुपमा आफ्नै र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षका रुपमा महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेताका रुपमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो । ओलीले ठाकुरको साथ लिएर पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको घेराबन्दीलाई रणनीतिक चार्तुयताका साथ तोडे ।
तर, त्यो घेराबन्दी फेरि नयाँ ढंगले देखापरेको छ । पाँचैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १४६ जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारीका लागि रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अहिले देशमा प्रधानमन्त्री ओली भर्सेस पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री देखिएको छ । सत्तासंघर्षका दौरान विकसित घटनाक्रम रोचक बन्दै गएको छ । एक, दुई, तीन, चार हुँदै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग राजनीतिक संघर्ष गर्ने अवस्था आएपछि ओलीले कसरी सामना गर्छन् ? उनको जीत या हार के हुन्छ ? चासोको विषय बनेको छ ।
काँग्रेसका पुराना नेता श्रेष्ठको निधनले अत्यन्तै मर्माहत बनायो : रामचन्द्र पौडेल
नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई महतोको निर्देशनः सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीका लागि काम गर्नुस्
लुम्बिनीमा चार मन्त्रीले पनि पाए राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा मताधिकार
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध शेरबहादुर देउवा आक्रामक, आवश्यक परे सडक संघर्ष नै गर्ने !
प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई भने-‘तिमीले खाएको सपथ झूठो हो, सरम छैन ?’
योगेश भट्टराईको टिप्पणी : बजेट मुलत: जनमुखी छ
जे मन लाग्यो त्यही गर्ने स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन र अराजक नेता केपीजी नै हो
लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको तयारी पूरा, भोलि मतदान